2018 အတွက်အကောင်းဆုံး MULTIPLAYER ဂိမ်း: ဖော်ပြချက်နှင့်ဓာတ်ပုံနှင့်အတူထိပ်ဆုံး 10 ဦး - ဂိမ်းပြဿနာများ - 2019
Soulcalibur VI ကို
NBA 2K ကစားကွင်း 2
စုစုပေါင်းစစ်ပွဲ Saga: Britannia ၏ Thrones
ဇီဝ Inc က ရွေးနှုတ်
အဆိုပါလေယာဉ်အမှုထမ်း2စီမံကိန်းအတွက် - ပွင့်လင်းကမ္ဘာကြီးထဲမှာ MMO-ပြိုင်ပွဲကိုဖန်တီးရန်တစ်ဦးရည်မှန်းချက်ကြီးကြိုးစားကြပါတယ်။ အခြားကစားသမားနှင့်အတူ, အစစ်အမှန်မရေိကပုံနဲ့တူတဲ့, ကွဲပြားခြားနားသောနေရာများပေါ်တွင်ပျော်စရာနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တွေအများကြီးစီးဘာလို့လဲဆိုတော့ဂိမ်း၏အမျိုးအစားအတော်များများဟာပရိတ်သတ်တွေအရသာသို့ရောက်ကြ၏။ သငျသညျ, ထိုအဆင့်အတွက်ထိပ်တန်းနေရာကိုစုစည်းနှင့်စစ်တိုက်ခြင်းငှါလမ်းကြောင်းစီးစီစဉ်ဖို့အခမဲ့များမှာ! တင့်တယ်ဂရပ်ဖစ်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအတန်း၏ရရှိနိုင်ကားကြီးမားတဲ့အရေအတွက်ကို - စီမံကိန်း၏မျက်နှာသာအတွက်လေးနက်အငြင်းအခုံ။
ကျပန်းကစားသမားသုတ်သင် - ထို့နောက် duel ပြိုင်ကားသူ့ကိုစိန်ခေါ်
ဂျပန်တိုက်ပွဲတွေဂိမ်း Soulcalibur သူ့ကိုနောက်ကွယ်မှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တစ်ပြောင်ပြောင်တောက်သောသမိုင်းရှိပါတယ်။ အဆိုပါစီမံကိန်းကိုတစ်ချိန်ကဓလေ့ထုံးတမ်းဂိမ်းအခြေခံအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်ဓားနှင့် nunchaku နဲ့သူ့ရဲ့ရန်ပွဲသရုပ်ပြမယ့်အမျိုးအစားထဲမှာသူပုန်တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ခဲ့သည်။ Rivia အလွန် Geralt ကြည့်ရှုသောဆဋ္ဌမစိတျအပိုငျး, တိုက်ပွဲများဂိမ်းများကိုများစွာသောပရိတ်သတ်တွေနှစ်သက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဓါးသွားပေါ်မှာ dynamic တိုက်ပွဲများအထင်ကြီးကြည့်ဖို့ဆက်လက်! အွန်လိုင်း mode ကိုတစ်ဦးချင်းစီကတခြားအပေါ်ကျွမ်းကျင်မှုရယူနိုင်ပါတယ်နှင့် screen ပေါ်မှာသေစေနိုင်သော pirouettes တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပန်ကာတယ်ကြသူကစားသမားများနှင့်ပြည့်စုံသည်။
Witcher အာရှသခင် katana စိန်ခေါ်
Paladin များကို - ရေနွေးငွေ့ပေါ်မှာဤနွေဦးနာမည်ကျော်ဂိမ်း Overwatch တစ်ဦးကိုယ်ပွားထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဂိမ်းစက်ပြင်နှင့်ထောက်လှမ်းရေးအခမဲ့ MOV သေနတ်သမားမှရွှေ့ပြောင်းနှင့် Blizzard ကနေထိခိုက်ပင်ပရိတ်သတ်တွေ relished ။ ပြောင်လက်တောက်ပသောဂရပ်ဖစ်, ထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်တွေနဲ့ဇာတ်ကောင်ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် Modes သာ, ပြောင်းလဲနေသောတိုက်ပွဲများနှင့်များစွာ - ဤအရာအလုံးစုံ Paladin များကိုယခုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းဂိမ်းထဲကတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။
Paladin များကိုပင် Overwatch ကနေအများကြီးချေး, ဒါပေမယ့်ဒါနိုင်နှင့်၎င်း၏ရှေ့ပြေးပုံစံများအတွက်မေတ္တာနှင့်မ
ကွယ်လွန်သွား Real-time မဟာဗျူဟာ ... ယနေ့ငါဒီအမျိုးအစားစိတ်ဝင်စားနေသောအနည်းငယ်ရှိပါတယ်ထင်ပါတယ်။ သို့သော် Northgard စီမံကိန်းသည်ဂန္ Real-time မဟာဗျူဟာ၏ဒြပ်စင်သာစုပ်ယူရန်, ဒါပေမယ့်လည်းအများကြီးချစ်ရာသခင်သည်ယဉ်ကျေးမှု၏ mechanics ရဲ့လေ့လာသင်ယူနိုင်သောအမျိုးအစားအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနှင့်ရဲရင့်ကိုယ်စားလှယ်, ဖြစ်ခဲ့သည်။ နော်ဒစ်စတိုင်နှင့်ဗိုက်ကင်း၏ယဉ်ကျေးမှုဖို့မြောက်မြားစွာကိုးကားဂိမ်းမယုံနိုင်လောက်အောင်လေထုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ Northgard - အကောင်းဆုံး multiplayer mode ကိုအတူအကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာဒီနှစ်။
ပိုများသောပထမဦးဆုံးအစိတျအပိုငျးလက်နက်ကိုင် Arma အတိုင်းအတာများနှင့်အတူတူပင်ကောင်တာ Strike ၏ mechanics ရဲ့အလွန် ချစ်. မဟုတ်သောသူတို့၏အဘို့အလေးနက်နည်းဗျူဟာသေနတ်သမားအဖြစ်သူ့ဟာသူ positioned သိရသည်။ သဲမုန်တိုင်း၏အသစ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုမူရင်း၏ဥပဒသေမြားမှစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်နေဆဲ: မကြာခဏစိုးမိုးရေးပြေးရသောကျွန်တော်တို့ကိုအမာခံအဖွဲ့သေနတ်သမား၏ရှေ့မှောက်၌ "ပထမဦးဆုံးရန်သူမြင်၏, သူအနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။ " စီမံကိန်းအတွက် multiplayer mode ကို dezmatch အမြားအတင်ဆက်ပေမယ့်ပင်သူတို့လက်နက်ကိုင်ကမ်းလှမ်းသောလက်တွေ့ mechanics ရဲ့နဲ့အတူပျော်စရာဖြစ်ကြသည်။
Insurgensy သရုပ်မှန်သေနတ်သံများ၏အသံနှင့်အတူအဆုံးသတ်, လှုပ်ရှားမှုများ၏စက်ပြင်ကနေအရာရာအတွက်ခြေရာခံနိုင်ပါတယ်
multiplayer Cubism ဒဏ်ငွေကိုထပ်
အစောပိုင်း Access ကိုနောက်ဆုံးတော့စစ်မှန်တဲ့မျက်နှာကိုထင်ရှားဒီနှစ် unfinished ။ Stonehearth စီမံကိန်းကိုအမှန်တကယ်အချိန်အတွက် RPG element တွေကိုနှင့်မဟာဗျူဟာနဲ့ sandbox 'ဖြစ်ပါတယ်။ ကစားသမားများကသူတို့အခြေချကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ otstraivaya, ကြမ်းတမ်းသောအခြေအနေများအတွက်ရှင်သန်ရကြမည်။ သင့်ရဲ့ရွာကိုပထမဦးဆုံးသူမြို့သားသိမ်းပိုက်မည်သည့်အခါ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုထုတ်လုပ်မှုနှင့်စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတည်ထောင်နေဖြင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးရမည်ဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သောဒါကြောင့်ကစားသမားမှဖော်ရွေ, ဒါကြောင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ပြဿနာများမဟုတ်ကမ္ဘာကြီးကို Stonehearth ခန့်မှန်းရခက်ရလဒ်များကိုမှဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါအလျင်စလိုဆုံးဖြတ်ချက်များယူဂိမ်းကစားခိုင်းပါလိမ့်မယ်။
ယခုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံး multiplayer ဂိမ်းတွေထဲမှာအားကစား Simulator ကိုမဖွစျနိုငျသညျ။ ဤအချိန်ဖီဖာသို့မဟုတ် PES မရှိ, ဘတ်စကက်ဘောအွန်လိုင်း Arcade ဂိမ်း NBA 2K ကစားကွင်း 2. ကစားသမားတစ်ဦးကိုမှန်ကန်ဘတ်စကက်ဘောမော်ဒယ်များများ၏ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အားကစားရှိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ယူပါ။ လက်စွပ်ရဲနှင့်ရှည်လျားသောအကွာအဝေးကနေယဉ်ရိုက်ချက်များအောက်မှာဖြတ်သန်းတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် Slam dunks မျှော်လင့်နေပါတယ်။ ခေတ်မီဘတ်စကက်ဘောကာတွန်းအပေါငျးတို့သဗေဒ NBA 2K ကစားကွင်း2မှာစုဝေးစေတော်မူ၏။
Feints နှင့်ထိပ်ကနေပစ် - ပုံမှန်အတိုင်းဂိမ်းဒြပ်စင်။ အဘယ်သူမျှမစိတ်ဝင်စားဖြစ်ပါတယ်ဂန္ထဝင် Two-အမှတ်
ဂိမ်းသနေိုငျစုစုပေါငျးစစ်ပွဲစီးရီးအွန်လိုင်းနယ်ပယ်တွင်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ နည်းဗျူဟာရိုးရှင်းသော၏ပရိသတ်များရင်သပ်ရှုမောဖွယ် 4x-မဟာဗျူဟာသစ်ကိုတစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက်ရဲ့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားစစ်ရေးအစွမ်းသတ္တိကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာစစ်ဆေးနေ။ စုစုပေါင်းစစ်ပွဲ Saga: Britannia ၏ Thrones ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမြေပုံနှင့်စစ်မြေပြင်ပေါ်တွင်စစ်တပ်များ၏တိုက်ရိုက်အမိန့်ပေးအပေါ်ဂန္ထဝင် mechanics ရဲ့ပေါင်းစပ်။ သင်, စီးပွားရေးကိုဘယ်လိုတဆင့်စဉ်းစားရန်မြို့ဖွံ့ဖြိုးနှင့်သိပ္ပံလေ့လာစူးစမ်းဖို့နှင့်သူ၏စစ်သားများများအတွက်အရည်အချင်းစစ်ရေးခေါင်းဆောင်များနှင့်စစ်မှန်သောဥပမာဖြစ်ရှိသည်။ အံ့မခန်းနှင့်တင်းမာနေအကြီးအကျယ်တိုက်ပွဲအခြားကစားသမားများနှင့်အတူ collisions ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်စုစုပေါင်းစစ်ပွဲအတွင်းဖြစ်ပျက်မထားဘူး။
ဗြိတိန် warlike အမျိုးအနွယ်ကိုပင်ကြီးအရောမ Legion ထိတ်လန်
အဆိုပါဂိမ်း၏အကောင်အထည်ဖော်မှုမှ multiplayer ခြင်း simulation အံ့အားသင့်စရာကစားသမားစိတ်ဝင်စားဖို့ချဉ်းကပ်ဘို့အထောက်ခံမှုနှင့်အတူယခုနှစ်အရှိဆုံးစိတ်ဝင်စားဖို့တစ်ခုမှာ။ အဆိုပါဇီဝ Inc က ရွေးနှုတ်သောသူ၏လူနာရောဂါဖို့ကြိုးစားပါတယ်သူတစ်ဦးဆရာဝန်ကစား။ အွန်လိုင်း mode မှာ, သင်လူနာကုသရန်နှင့်အသစ်လက္ခဏာများထုတ်ဖော်ရန်အခြားကစားသမားနှင့်အတူဖြစ်လိမ့်မည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျအမွဲရောဂါ၏ဘေးထွက် ယူ. လုံးလုံးလြားလြားကံဆိုးလူနာအရေးပေါ်သိမ်းထားဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါရွေးချယ်မှုကိုဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစီမံကိန်းကိုအမာခံမတူပေမယ့်စားရန်ဖြစ်တော်မူ၏အတွက်တစ်ချိန်တည်းနှောင့်နှေးမှာ!
ယခုနှစ် multiplayer ဂိမ်းရဲ့ထိပ်မူကြမ်းပြိုင်ပွဲအမျိုးအစားများ၏စာရင်းပိတ်။ Forza Horizon4- developer များအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တုံ့ပြန်မှုအဆိုပါလေယာဉ်အမှုထမ်း 2, ထိပ်ဖွင့်လှစ်။ ပွင့်လင်းကမ်ဘာပျေါတှငျပြိုင်ပွဲ Simulator ကိုအနုပညာကြီးမားလှပနေရာများနှင့်ကားအစိုင်အခဲရွေးချယ်ရေး၏ပရိသတ်များ၏စိတ်နှလုံးကိုအောင်နိုင်နိုင်ခဲ့သည်။ အွန်လိုင်းဂိမ်းနဲ့အခြားပြိုင်ကားသမားနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့်အဆင့်၏ထိပ်မှ၎င်း၏လမ်းအောင်ပေးထားပါတယ်။ လူမျိုးနှင့်အံ့မခန်း tuning ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုယခုနှစ်အကောင်းဆုံးပြိုင်ကားဂိမ်းထဲကတစ်ခု၌သင်တို့၏နေထိုင်ကြွယ်ဝစေ။
မဆိုယှဉ်ပြိုင်အွန်လိုင်းဂိမ်းအောင်မြင်မှုအောင်မြင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်အပြည့်အဝဖို့အားလုံးကိုအကောင်းဆုံးပေးရကစားသမားတွန်းအားပေးသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုသစ်ကိုပတ်ပတ်လည်စီသစ်ကိုဆိုက်ရောက်စီသစ်ကိုပါတီ - ဒီ AI အဆန့်ကျင်ကစားခြင်း, သငျသညျအရမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ကြောင်းထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားဂိမ်းငျကွီးစိတ်ခံစားမှုပေးခြင်းနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာက virtual လောကသို့ဆွဲပါလိမ့်မယ်။